Madaxweynaha Kenya Oo Ku Guul Daraystay Qorshihiisii Dacwadda Badda | Gabiley News Online
Madaxweynaha Kenya Oo Ku Guul Daraystay Qorshihiisii Dacwadda Badda
Dawladda Kenya ayaa ku guul daraysatay qorshaheedii ay ku damacsanayd in ay dawladda federaalka soomaaliya ku qanciso in muranka dhinaca xuduuda bada ee hadda ay ku jirta maxkamadda Cadaalada aduunka laga soo saaro isla markaana lagu dhameeyo wada hadal.
Kulan uu ka soo shaqeeyay Ra’isal Wasaaraha Dawladda Federaalka Ethiopia Abiy Ahmed Ali oo uu isku soo hor fadhiisiyay madaxweyneyaasha wadamada Soomaaliya iyo kenya ayaa ku soo dhamaaday in dib loo soo celiyo wada shaqayntii iyo xidhiidhkii uu dhaxeeyay labadaasi wadan.
Dublomaasi soomaali ah oo uu waramayay Wargeyska Ka soo baxa Dalka Kenya ee Business Daily, ayaa sheegay in laga dhur sugi doono go’aanka Maxakamadda ICJ,
Wargeyska ayaa intaasi ku daray in dhinaca kenya ay xogtooda aad u adkeeyeen, ka dib markii shirkaasi dhex maray madaxweyneyaasha soomaaliya iyo kenya uu ahaa mid albabaadu u xidhan yihiin.
“Labadda Madaxweyne ee Uhuru Kenyatta iyo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa isla gaadhay in la soo celiyo xidhiidhkii u dhaxeeyay labada, sidoo kalena waxa ay isla qaateen in dib loo soo celiyo safiiradii labadaasi wadan ee muqdisho iyo nairobi”
Khilaafka Dulmomaasiyadeed ee u dhaxeeyay wadamada Soomaaliya iyo Kenya ayaa ka dhashay ka dib markii bishii hore magaaladda London uu ka dhacayay shir lagaga hadlayay shiiaalka dihin ee ku jira dhulka soomaaliya.
Shiidalkaasi oo la qorshaynayo in la soo saaro ayaa waxa ay dawladda kenya ka keentay shaki ku saabsan in dhulka shiidaalka laga baadhayo ay ku jirto dhinaca xuduuda badda ee labadaasi wadan ay ku muransan yihiin.
Si kastaba ha ahaatee kulankan u danbeeyay ee ay wada yeesheen madaxweyneyaasha wadamada Kenya Uhuru Kenyatta, iyo soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ahaa mid si weyn isha loogu hayay.